Posted by: chhepyastra weekly | अक्टोबर 31, 2010
राजनीतिक सहमति बिना आर्थिक निर्णय हुनसक्दैन
हेमन्त प्रकाश ओली ‘सुदर्शन,‘ पोलिटव्यूरो सदस्य, एनेकपा माओवादी
० कहिल्यै नटुङ्गनिे प्रधानमन्त्रीको खेलमा तपाईहरू कहिलेसम्म लागिरहनु हुन्छ ?
हामीले पहिल्य नै नयाा प्रक्रियामा जाऊ भनिसकेका छौा । नेकपा माओवादी अहिले चलिरहेको प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियाको पक्षमा छैन । जनताले पनि नयाा प्रक्रियामार्फत् मुलुकले छिटोभन्दा छिटो नयाा सरकार पाओस् भन्ने चाहेको छ ।
० काम चलाउ सरकारले जर्बजस्ती रूपमा बजेट ल्याउने भनिरहेको छ, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
कामचलाउ सरकारले कुनै पनि हालतमा बजेट ल्याउन सक्दैन भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले पटक-पटक भन्दै आएको छ । संसद्मा बजेट ल्याउन पहिला राजनीतिक सहमति हुनुपर्छ । राजनीतिक सहमति बिना आर्थिक निर्णय हुनै सक्दैन । बजेट ल्याउने विषयमा सरकार होइन राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन जरुरी छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले एकतर्फी रूपमा बजेट ल्याउन सम्भव छैन ।
० माओवादीले बजेट ल्याउन नदिएर देशलाई बर्वादीतर्फ लाादैछ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति बाहिर आएको छ, यस
सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ ?
काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले भारतीय विस्तारावदको निर्देशनमा जे मन लाग्यो त्यही अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । मुलुकलाई वर्वार्दीतर्फ डोर्‍याउन भारतीय विस्तारवादले आन्तरिक रूपमा खेलिरहेको छ । हाम्रो पार्टीको विरुद्ध भारतीय दलालहरू काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीमार्फत् लागि परेका छन् । नेपाली जनताको विरुद्ध समेत उनीहरूले बोलिरहेका छन् । यसको कुनै तुक छैन ।
० तपाईंहरू र एमाले बीच भएको सहमतिले कुनै निकास निकाल्न सकिरहेको छैन, अब कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ?
एमाले भनेको माधव नेपाल र केपी ओली मात्र होइन, एमालेभित्र देशभक्तिपुर्ण चेतना भएका कयौ साथीहरू छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ । मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि ती साथीहरूसाग एकता बढाउने योजना अनुसार नै हामीले एमालेसाग सहमति गरेका हौा । हामीले वामपन्थीहरूबीचको एकताको आधारमा एउटा वामपन्थी मोर्चा बनाउने अभियान थालेका हौं । त्यही सिलसिलामा एमालेसाग सहमति भएको हो । हामी समस्या समाधानको लागि छिटोभन्दा एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । वामपन्थी बीचको एकताको विरुद्ध केही शक्तिहरू लागेका छन्, त्यसका विरुद्ध पनि नेपाली जनता एकजुट हुन्छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
० हालैमात्र जनसेनाका कमाण्डरहरूले चीन भ्रमण गरेको विषयलाई लिएर सरकारले आपत्ति जनाएको छ, यस विषयमा के भन्नु
नेपाली सेनाका कमाण्डरहरूले जे-जस्ता क्रियाकलापहरू गरिरहेका छन्, त्यस’boutमा कुनै पनि टिकाटिप्पणी हुादैन तर विदामा रहेका जनमुक्ति सेनाका कमाण्डरहरूको चीन भ्रमण या अन्य विषयलाई लिएर राजनीतिक गन्ध दिन खोज्ने जुन प्रवृति छ, त्यो वास्तवमा प्रतिक्रियावादी कोणबाट हामीलाई होच्याउन गरिएको चेष्टा हो । विदामा रहेका जनसेनाका कमाण्डरलाई आˆनो योजना अनुसार जहाासुकै जान पाउने स्वतन्त्रता छ ।
० अनमिनको म्याद पनि सकिादैछ, शान्ति प्रक्रियामा कुनै प्रगति भएको छैन, यस्तो अवस्थामा अब शान्ति प्रक्रिया कसरी अगाडि
सधै अनमिन रहिरहनु पर्छ भन्ने पक्षमा हामी पनि छैनौा । अनमिनको निश्पक्ष भूमिकाको विरुद्ध प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू लागिरहेका छन् । तिनीहरूको योजना अनुसार नै नेपालको शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गदिै अनमिनलाई फिर्ता गर्ने षडयन्त्र हाुदैछ । यो कुरा हामीलाई मान्य हुादैन ।
० त्यसोभए, अनमिन छादै नेपालको शान्तिप्रक्रिया, निश्कर्षमा नपुग्ने भयो त ?
सेनासमायोजन गर्ने, संविधान लेखिसक्ने अनि शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुर्‍याएर अनमिनलाई विदा गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यसो हुन सकेन भने अर्को कुनै विश्वासिलो मध्यस्थकर्ता भयो भने त्यो विकल्प हुन सक्छ नत्र भने अनमिनलाई यहााबाट विदाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गलत छ ।
० पछिल्लो समय तराईंको शान्ति सुरक्षा अत्यन्तै नाजुक बन्दै गएको छ, सरकारले शान्ति सुरक्षा दिन सकिरहेको छैन, यस
भारतीयहरूको संरक्षणमा तराईमा यस्ता गतिविधि भइरहेका छन् । खुल्ला सीमानाका कारण र भारतीय शासकहरूको नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउने योजना अनुसार नै तराईमा शान्ति सुरक्षा नाजुक बनेको हो ।
० सरकारको कार्यशैली तथा तराईको आन्दोलन हेर्दा माओवादीलाई एक्ल्याउने जस्तो देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूको
रणनीति कस्तो हुन्छ ?
हामी जनताबाट कहिल्यै एक्लिन सक्दैनौा, हामीलाई तराईबाट एक्ल्याउने जुन प्रयास भएको छ त्यो त्यहीका जनताले चकनाचुर पारी दिने छन् । हाम्रो पक्षमा रहेका जनता देखि छटपटाएका केही शक्तिहरू अतालिएका छन् । उनीहरूको षडयन्त्रलाई मधेसी जनताले राम्रोसाग बुझेका छन् । हाम्रो कामकारवाही र भूमिकाले मधेसी जनताबाट हामीलाई कुनै शक्तिले अलग्याउन सक्दैन । हामी जनताको पार्टी भएको हुनाले जनताले पनि हामीलाई आˆनो पार्टी ठानेको हुनाले कसैले एक्ल्याउन खोज्दा त्यो आफै विनाश भएर जान्छ ।